5 Ukuqonda gwenxa kweNtengiso kunye neNyani | Martech Zone
Sisebenza kwisindululo ngoku apho ithemba lithe bafuna hamba ngokukhawuleza. Uninzi lwabathengisi luza kudla amathe kunye nethuba lokufumana utyikityo olukhawulezileyo, kodwa ngoku ndiyijonga njengophawu lwesilumkiso. Ukuhamba ngokukhawuleza kukhokelela kulindelo lokufumana isikhokelo ngokukhawuleza. Ngelixa oko kunokwenzeka kunokwenzeka de sihlalutye kakuhle umxhasi, ukhuphiswano, kunye nethuba, asiqinisekanga ukuba sizifumana ngokukhawuleza kangakanani na iziphumo.
Ngaba kukuqonda phosakeleyo? Ubuxoki? Okanye mhlawumbi ulahlekile. Mhlawumbi kukudityaniswa kwazo zonke ezi zinto zingasentla, kodwa ukuthengisa kunemiceli mngeni engakholelekiyo. Ngamanye amaxesha ndicinga ukuba siyizisa kuthi kuba sihlala sithanda ezona ziphumo zingenakuthelekiswa nanto kulo naliphi na iqonga, indawo ephakathi okanye indawo yearhente.
Enkosi ngokulungileyo kubantu abathanda Indawo ephezulu eziqonda iintsomi ezininzi phaya. Bavelise le infographic eneembono eziphambili ze-5, inyani kunye neengcebiso zokuphucula impumelelo nganye:
inyaniso -65% yomxholo owenziwe ngentengiso ngu ayizange isetyenziswe yintengiso.
inyaniso Ngaphantsi kwe-10% yohlahlo-lwabiwo mali lokuya kwiinzame ezenziwayo ukuvelisa iziphumo zentengiso.
inyaniso -I-24% kuphela yeenkampani ezisesikweni ukuthengisa kwintengiso handoffs.
inyaniso - Izixhobo zinako yenze nzima inkqubo yakho yokuthengisa kwaye utshabalalise uhlahlo-lwabiwo mali.
inyaniso -28% yomxholo ngu ayifumaneki kwaye ukuthengisa kuchitha i-31% yexesha labo bayikhangela!
Qiniseka ukuba uzinika iingcebiso ezibonelelwa yi-Highspot kwi-infographic yabo:
The Indawo ephezulu Iqonga lokunika amandla lokuthengisa lidibanisa amaqela okuthengisa kwimixholo efanelekileyo kwimeko nganye, ibonelela ngeendlela eziguqukayo zokubonisa umxholo kubathengi, kwaye ihambise ukubonakala kwexesha lokwenyani nokuba ngaba abathengi bawufumana umxholo obandakanyekayo. Phambili kubahlalutyi ibonelela ngokuqonda okusebenzayo ukuze imimango kunye nomxholo ungaphuculwa.
tags: ukuthengisa kunye nentengisongcamangoimbono xa ithelekiswa nenyaniukuqonda ngokuchasene nenyaniinyanisoukuthengisa kunye nentengisoulungelelwaniso lokuthengisa kunye nentengisoumxholo wentengiso